တရုတ် Gracebestbuy အင်တာနေရှင်နယ် - Apple ရဲ့ iPhone က X ကိုမဆိုယခင် iPhone ထက် သာ. ကောင်း၏၎င်း၏ Value ကိုကျင်းပ
Apple ရဲ့ iPhone က X ကိုမဆိုယခင် iPhone ထက် သာ. ကောင်း၏၎င်း၏ Value ကိုကျင်းပ
သငျသညျ၎င်းငျး၏တနျဖိုးကိုကိုင်ထားနိုင်မထားတဲ့ iPhone ကိုဝယ်ခြင်းငှါရှာနေပါလျှင်အဘယ်သူမျှမကနောက်ထပ် Apple ရဲ့ iPhone ကို X တို့မှာထက်ကိုကြည့်ရှု
လတ်တလောလေ့လာမှုမှာတော့ဖျက်သိမ်းမှုကုမ္ပဏီ B-စတော့အိတ် iPhone ကိုယင်း၏တန်ဖိုးကိုကိုင်ပြီးရဲ့အကောင်းဆုံးအလုပ်မထားတဲ့ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အိုင်ဖုန်း X ကိုတစ်အလယ်တန်းဈေးကွက်ထဲမှာမူရင်းတန်ဖိုးက 85% ဆက်ပြီးအားဖြင့်ထိပ်ပေါ်မှာထွက်လာ၏။ အဆိုပါဟန်းဆက်ပြန်လည်ရောင်းချရန်မှအမြောက်အများအတွက် iPhone ကို X ကိုမဝယ်ကြောင်းကုမ္ပဏီများလေ့လာမှုများ၏မိတ္တူရယူခဲ့သည့် 9to5Mac သည်အတိုင်း, B-စတော့အိတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိ၎င်း၏လက်လီစျေးနှုန်း၏ 75% ထိုသို့လေးလည်းနေကြသည်။
Apple ကအစဉ်အဆက်ကုမ္ပဏီစမတ်ဖုန်းမှ affixed ရဲ့အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း tag နဲ့ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က၎င်း၏ iPhone, X ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါတပ်စခန်းသည် iPhone X ကိုမော်ဒယ် $ 999 ကုန်ကျပြီးပိုသိုလှောင်မှုနဲ့အတူဗားရှင်း $ 1,149 များအတွက်တတ်၏။ B-စတော့အိတ်ဒေတာအိုင်ဖုန်း X ကို Reseller ပေးတဲ့အနည်းဆုံး $ 849,15 ရကျိုးနပ်သည်အကြံပြုထားသည်။
စမတ်ဖုန်းပုံမှန်အားကောင်းစွာသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုကိုင်ကြပါဘူး။ နယူးအင်္ဂါရပ်များ, တိုးတက်လာသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆွဲဆောင်ပြိုင်ဘက်သိသိသာသာသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုချမောင်းထုတ်ရန်လေ့ရှိပါတယ်။ Apple ရဲ့ iPhone များအလားတူတန်ဖိုးကိုဆုံးရှုံး, ဒါပေမဲ့သူတို့အများဆုံးထက်ပိုကောင်းတဲ့အထိကိုင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ 9to5Mac အဆိုအရ, B-စတော့အိတ်ရဲ့ဒေတာကိုအိုင်ဖုန်း X ကိုမဆိုထက်ပိုကောင်းတဲ့ယင်း၏တန်ဖိုးကိုကိုင်ဆောင်မှုအတွက်မှတ်တမ်းအသစ်တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်အကြံပြု စျေးကွက်ပေါ်ရှိအခြား iPhone ကို။
အဆိုပါတွေ့ရှိချက်အသုံးပြုသို့မဟုတ်ပြန်လာသောအိုင်ဖုန်းဆည်းပူးကြောင်းကုမ္ပဏီများအတွက်ဖွယ်ရှိကောင်းသောသတင်းဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာအစတစ်ခုက iPhone X ကိုပိုင်ဆိုင်ဒီနှစ်အသစ်တခုစက်ပစ္စည်းအတွက်အထဲတွင်ဖွင့်ဖို့စီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်သူမည်သူမဆိုအတွက်သတင်းကောင်းပါပဲ။ ဘာမှပါက iPhone အသစ်တစ်လုံးရဲ့ကုန်ကျစရိတ် defraying ၌ရှည်လျားသောလမ်းကိုသွားပါလိမ့်မယ်။
Post ကိုအချိန်: ဇူလိုင်-30-2018